ANP kaJohn de Mol, iMvume Yezimvume, isigaba sesimangalo semvume yelayisensi 2: Rosmalen Nedland Bailiffs BV: Martin Vrijland
Uma usebenzisa indlela ANP kaJohn de Mol etholakala lapha kusayithi, ukwazi ukulandela ukuthi inkampani inikeza kanjani izimangalo zamalungelo welayisensi yemvume ye-Permission ngezinsolo zokuhlukunyezwa kwezithombe ezihlokweni. Ubuye ufunde ukuphendula kwami ​​kulokhu (bheka lapha).
Manje sesiseceleni esilandelayo, yilokho lapho i-ANP kaJohn de Mol isenze khona ihhovisi lomsizi wesikhonzi senkantolo. Konke lokhu kudlula ku-Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV Kusuka kuma-imeyili atholakele kimi kubonakala sengathi abantu abaningana bahlupheka ngalezi zimangalo nokuthi amanye amabhulogi wokuzilibazisa asuse ngokuphelele iwebhusayithi yabo ngenxa yokwesaba izimangalo. Abanye baye bafika ezinkantolo ezibizayo. Uma uba ilungu ngendlela yobulungu obukhethekile, ungangena lesi sihloko funda ukuthi ngithole kanjani isixazululo sokuvimbela izimangalo zesikhathi esizayo ze-billionaire uJohn de Mol. Ngeke sikwazi ukusola uJohn ompofu ukuba enze lezi zinkohlakalo. Yiqiniso kufanele uqaphele abancane njengabantu abayizigidigidi.
Funda incwadi yokuqala engayithola ku-Rosmalen Nedland Bailiffs lapha:
Uzothola ukusabela kule ncwadi yokuqala evela e-Rosmalen Nedland lesi sixhumanisi. Yiqiniso, uRoneymalen Nedland wezigidigidi uJohn kumele akhombise ukuthi uqhubeka nemikhuba yokuphanga futhi ungabethemba ukuthi uzoqhubeka. Ngabe ngithola incwadi yesibili:
Yiqiniso ngiphendule kulokhu. Funda ngokwakho:
Angikwazi ukukuthola esenzweni sakho noma se-ANP. Okokuqala, isiphakamiso senziwe nguMshini Wokuvumela. Isiphakamiso sishiya igumbi lokuxoxisana, kodwa ukubhala kwakho kubonisa ukuthi lesi sikhala asinikeziwe. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka noma yikuphi ukuphikisana nesiphakamiso, ngokushesha kuphethwe ukuthi kuphela ukukhetha kwe-1, okungukuthi inani eligcwele lingadliwa. Angivumelani nesiphakamiso semishini ye-Permission futhi angisenzi.
Ake sithi ngikuthumelela isiphakamiso futhi unqabe lesi siphakamiso noma ufike nesiphakamiso sokuphikisa; ingabe lokho kungivumele ukuba ngifake isicelo sokuqala ngokushesha? Cha. Khona-ke akufanele ngilibize ngokuthi isiphakamiso. Isiphakamiso sishiya igumbi lokuxoxisana. Yilona incazelo yegama elithi 'isiphakamiso'.
Angikaze ngiqaphele noma yikuphi umthetho okwenza kube lula ukwenza umkhuba we-ANP noma iMishini Yezimvume, kungenjalo ngabe angizange ngisebenzise izithombe ezenzakalweni ezihlokweni zami nhlobo. Uma i-ANP noma iMishini Yezimvume ingitshele ukuthi kunamalungelo okusebenzisa izithombe, ngabe ngithathe isenzo sokuqala. Ngakolunye uhlangothi, akukho lutho olwake lwakuzwakala kulolu hlobo lweminyaka. Uma ngabe ngike ngizwe isignali kuleyo ndlela, ukuphindaphinda kungavinjelwa. Lokhu bekuqinisekisile ukuthi, ngakho-ke, kuningi okungenzeka kube ukungaqondani okukodwa. I-ANP neMishini Yezimvume, ngakolunye uhlangothi, ngokusobala iye yabambezela leli cala futhi lahlehlisa kuze kube yilapho ezinye izithombe zisetshenziswe "ngokungemthetho". Ngenxa yalokho, yonke inkambo yezenzakalo idonsela ekuqotheni okuqaphelayo, okulindelwe kuze kube yizinkulungwane ezimbalwa zama-euro ezingafunwa.
Ngifuna kwenziwe ukuthi isiqinisekiso isimangalo futhi babonise ukulangazela izithombe okuyinto ukuphumula amalungelo ukususa, kodwa ngenza bengase bafune khona ukuba nobabili Imvume Machine, njengoba ANP, leli fomu impango nokuhuheka ziyophela. Isenzo esilula sokwazisa okwesikhashana ngemithethonqubo sanele ngokwanele ukuvimbela ukwephulwa okunye okwephulwa. Umuntu oqondisiwe ubalwa ngamabili. Noma kunjalo, akukaze kuxwayiswe ngisho. I-ANP noma iMishini Yezimvume ayikho lutho. Angiyena ummeli ngakho-ke awukwazi ukulindela ukuba ngazi zonke iziqephu ezincane noma ukubusa kusukela kunani elikhulu lemithetho nemithetho ngenhliziyo. Ngake ngaqala ukubhala izihloko njengomuntu ongenayo amateur futhi angitholanga ukuqeqeshwa kwalokhu, ngakho-ke ukuphendula okungavumelani ukulindela ukuthi ngabe ngabe ngiyazi lokhu. Ungase wazi konke lokhu uma ufunde isayithi lami.
Ngigcina imfuneko yokuthi ukhansele zonke izimangalo kanye nezicelo futhi ugcine nemfuneko yokuthi ubuyiselwe izindleko zami. Wena, i-ANP neMishini Yezimvume futhi unquma amanani akho futhi ungashiyi indawo yokuxoxisana. Okufanayo kusebenza nangenye indlela nxazonke; kungakhathaliseki ukuthi uphikisana nalokhu noma cha. Uma ufuna ukuhlela lokhu, ungenza kanjalo ngokuyeka isimangalo. Kuzodingeka ngikukhokhise yonke imibhalo engiyibophezela ngaleso sikhathi (ngakho-ke lokhu kubhala). Lokhu akusikho isiphakamiso ngakho-ke akunikezi indawo yokulahlwa noma yokuxoxisana.
Isiphetho: uma uphonsa isimangalo sakho futhi uyeka izenzo zakho zokuphanga, ngizosusa masinyane zonke izithombe. Lena umsebenzi oqeda isikhathi esingazange ngiwuthole isikhathi saleso sizathu, ngoba kufanele ngibambe kanzima ku-database yami ukubona izithombe bese ngisuse ngesandla. Ngizoyithatha leso sikhathi ngokushesha nje lapho umisa imikhuba yakho yokuphanga egameni le-ANP. Ungiphoqa ukuba ngibe isidleke esikhulu sokuhlanza izindleko engingafuni ukukwenza nganoma yini. Angifuni ukuba ngibhekane nalezi zinto ezingekho emthethweni ze-billionaire uJohn de Mol, noma eyakho. Misa ngokushesha!
Engingathanda bakhohlwa ukubalula kule imeyili kuyinto Rosmalen Nedland iqhinga kunalokho ezimbi osebenza e-imeyili yakhe yokugcina, okungukuthi by anamathisela nencwadi unaddressed kusukela ANP okusikisela ukuthi ANP wayexwayise ngempela ukuze kusetshenziswe izithombe lapho amalayisense azophumula khona. Le nothi ebonakalayo ephuthumayo, kodwa-ke, ayihlanganisiwe ngakho-ke ayinanoma yini. Ingabe sibhekene nokufaka ingxabano engavamile nokukhohliswa ngokuphanga? Ngivele ngithumele i-PS-wena. Bheka lapha inothi elingathintekile:
Singasho ukuthi lena David - umzabalazo uGoliyati phakathi ukunyundela wajeziswa ngokuphelele futhi linesisekelo futhi opprobrious namabala Martin Vrijland kanye Billionaire futhi elicebe volksbeïnvloeder eNetherlands, uJohane de Mol. Ngakho-ke ngiyanicela ukuba ungisekele ngokuba yilungu, ngoba ingcindezi ikhula kakhulu futhi ingenakubekezelela; ingxenye ngenxa yalolu hlobo lomkhuba. Siyabonga kakhulu ngokusekela kwakho!
Ukusabela kusuka kubazingeli be-ANP ye-ANP ka-John de Mols PermissionMachine.com
I-Maas emthethweni ngokumelene nezimangalo zika-ANP kaJohn de Mol kanye ne-'pounty hunters 'Permission Machine.com yakhe
Ukuphendula kumshini wokugunyazwa kumanothi we-copyright we-ANP
Ukudalwa 'kweFuck John de Mol's Permission Machine Foundation'
I-ANP ithumela isimali esincane esinamandla kuMartin Vrijland ngenxa yezithombe zokugunyazwa kwelayisensi yelayisense
Amathegi: ANP, copyright, Faka isicelo, afakiwe, izithombe, ukusetshenziswa kwesithombe, John de mol, izimali zelayisense, UMartin Vrijland, umshini wemvume
18 September 2018 ku-20: 09
UJohn, ngiyaqonda ukuthi imithi yakho ye-botox cishe iyabiza kakhulu nokuthi indodana yakho ifuna okungaphezu kwebhokisi le-peanut esikhwameni sayo, kepha awuhambanga yini manje?
18 September 2018 ku-20: 19
Oh yebo, ngambiza uTalpa isikhashana ukuze ngithole uJohn efonini, kodwa kusobala ukuthi akaqapheli ukubuyela emuva, naphezu kwesicelo sokuphindaphinda unobhala wakhe.
18 September 2018 ku-20: 16
Mnu Vrijland othandekayo,
Yiqiniso ngizokusekela, futhi ngizoqinisekisa ukuthi lonke ihlazo liyanyamalala emahlombe akho.
uqinisile, mina we-ANP, u-Antie Nederlandse Partij uzoqinisekisa ukuthi ngeke ngisawuthonya abezindaba baseDutch futhi ngenze abantu bazi ukuthi kukhona amawebhusayithi afana nalokhu.
Ngenxa yalesi ngiyithathile izinyathelo ezinqala, sengikhululekile kakade nabo uMnu Peter R. de Vries, oye Kamasutra dadewethu, ukuze azishayi, uma uthumela kimi inombolo ye-akhawunti yakho yasebhange, singabangane njengezindaba ezinhle.
Umusa ovela ku-Blaricum.
18 September 2018 ku-20: 21
Yeka ukuguqulwa okumnandi!
Ngingagcina ngithole i-botox
18 September 2018 ku-20: 24
Imininingwane eyinhloko mayelana nokusebenzisana okukhulu phakathi kukaLinda noPeter R. de Vries ayinandaba nami, kodwa ngiyazisa isenzo sakho esikhulu!
18 September 2018 ku-22: 08
Cha, siya ezweni lakithi.
19 September 2018 ku-13: 00
Qinisa ndawonye! I-Social Data Nederland and de Mol namuhla yejaji
« Isikhathi sokuba ama-cyborgs wangempela!
I-spin elandelayo ku-Nicky Verstappen - Jos Brech psyop? Izithombe ezingcolile zobulili ezitholakalayo! »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.205.288
Hlaziya op ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?
ellysa op ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?